🚀 Bitcoin Mining kuwo wonke umuntu! | Crowd-Mining.io
14 Izinsuku Free Mining
Bitcoin Mining kuwo wonke umuntu!
Kuba super elula - Server yakho isivele isethiwe lusebenze. Dala i-akhawunti yakho manje. Futhi sithole Bitcoins yakho yokuqala. Vele usebenzise Bitcoin cloud mining service wethu!
Thola ukuthi yini eyenza esiyingqayizivele Crowd-Mining.io.
Bitcoin mining iklanyelwe ukuba isisetshenziswa futhi idla nzima. Isibalo amabhlogo okutholakele ngokukhipha Miners uhlala izinze. Ngemva iseva uthola block, ke imiklomelo ngokwayo nge isabelo Bitcoins. Okwamanje lesi share 25 Bitcoins.
Sinikeza zimali zethu ithuba ukutshala ibhizinisi lethu. Futhi ngokusekelwe ohlelweni ngenhla echazwe, wena ukuzuza inzuzo nsuku zonke. Ngaphezu kwalokho, abatshali bezimali bayatshelwa nge Daily-Mining-Newsletter yethu.
Bitcoin Mining block kunzima ngoba SHA-256 hash we amabhlogo unhlokweni kumele kube okungaphakathi noma ukulingana elitsheni. Le nkinga kungenziwa lula izinjongo incazelo: The Hash a block kumele aqale inani elithile amaqanda. Amathuba kubalwa a hashi oqala amaqanda amaningi sincane kakhulu.
Njengoba kushiwo ngenhla, izibalo olulodwa ibusa umzamo omkhulu zezibalo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba uhlale usesikhathini ne amaseva. Sisebenzisa le entsha ezikhishwe imishini Bitcoin ASIC. Siyabonga ukubambisana okukhulu, sithola amanani angcono kumaseva ezintsha.
Ngenxa ukuthuthukiswa ithimba lethu, singakwazi ngeqholo ukumemezela ukuthi sinesibonelo ezintsha Web-Dashboard ezikhishwe amakhasimende ethu. Kuyo Ungabuyekeza Imiphumela Daily Mining. Futhi-ke ukuthenga inkontileka esilandelayo.
Nginikeza imvume yami, ukuthi ikheli lami zingagcinwa.